မဆုံးရှုံးသေးခငျ တနျဖိုးတှသေိစခေငျြတယျ – Shinyoon
ကြှနျမ . . . မိနျးကလေးတဈယောကျပါ သို့သျော မာယာတှေ မသုံးတတျတဲ့ ခပျတုံးတုံး မိနျးကလေးတဈယောကျပေါ့ ။ လိုအပျနတောအခါ အလိုကျသတိလေး ဖွညျ့ဆညျးပေး လုပျပေးတတျပမေယျ့ မလိုအပျမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ဟနျဆောငျပွီး ဧညျ့ဝတျမကတြေတျဘူး ။
အဲ့တာကပဲ ကြှနျမရဲ့ အားနညျးခကျြ ဖွဈလာတာပါ ။ လူကွီး သူမပဲ ဖွဈဖွဈ အထကျလူကွီးပဲ ဖွဈဖွဈ လိုအပျတာထကျ ပိုပွီး မဖားတတျတဲ့အတှကျ အမွောကျကွိုကျတဲ့လူတှအေတှကျတော့ ကြှနျမက နဲနဲလေး အလိုကျမသိဖွဈနတေတျတာမြိုးလေ ။ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ညံ့တယျဆိုတဲ့ စကားလုံးမြိုးတှနေဲ့ မကွာခဏ အစှပျစှဲခံရတော့တာပဲ ။
ကြှနျမမှာ အမှနျတကယျ ပေါငျးတဲ့ အပေါငျးအသငျးဆိုလို့လဲ တကယျ့ကို အနညျးငယျလေးပဲ ရှိတာပါ လကျတဈဖကျ မပွညျ့တပွညျ့ အပေါငျးအသငျးနဲ့ ကြှနျမ ပြျောအောငျနပေါတယျ ။ ကြှနျမ အကွောငျးမသိတဲ့သူဆိုရငျ အကောငျးမမွငျနိုငျဘူးလေ ။ မာနကွီးလိုကျတာ မချေါခငျြသလိုလို မပွောခငျြသလိုလိုနဲ့ တဲ့ ကြှနျမအကွောငျးတှေ ပွနျပွီး ကွားရတဲ့အခါမြိုးမှာ ကြှနျမ ဘာမှ ရှငျးပွမနတေော့ ထငျခငျြသလိုသာ ထငျပါတော့ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ကြှနျမကိုယျကြှနျမသာ အဆငျပွအေောငျ နပေါတယျ ။
မုသားတှမှေ ခြိုသာတယျထငျတတျတဲ့ နားမှာ ကြှနျမစကားတှကေ ခါးကောငျး ခါးနနေိုငျတယျလေ ။ မရှိတာကို ရှိသယောငျယောငျ မသိတာကို သိသယောငျယောငျနဲ့ အလိုလိုကျ အကွိုကျဆောငျပွီး မနတေတျ မပွောတတျဘူး ။ ဖွဈသငျ့တာတှေ ရှိလာတဲ့အခါ စတေနာထားပွီး ပွောတတျသလို မဖွဈသငျ့တာတှေ မဖွဈလာအောငျလဲ တားတတျပါတယျ ။ အဲ့ဒီအတှကျ ကြှနျမနဲ့ဆို ဝေးဝေးက ရှောငျကွတာလေ ။
ကြှနျမ . . . မာယာတှေ သုံးနဖေို့ထကျ အရှိကို အရှိအတိုငျး ပွောပွတတျတာကို ပိုပွီး သဘောကတြယျ ။ ဒါပမေယျ့ သကာရညျစမျးထားတဲ့ ခြှဲ့ခြှဲ့နှဲ့နှဲ့စကားတှကေိုမှ ကွငျနာတယျလို့ ထငျတတျကွတာလေ ။ အဲ့တှကျ အခဈြရေးမှာလဲ ကံ​ကောငျးခွငျးတှထေကျ ကနျြခဲ့ခွငျးတှကေ မြားပါတယျ ။
စတေနာ . . . မှနျရငျ ရောငျပွနျလာလိမျ့မယျ တဲ့ သိပျတော့ အခြိနျမနှောငျးစခေငျြဘူး ။ တဈခါတဈရံ တနျဖိုးတှေ သိလာပွီးမှ ဘယျတော့မှ ပွနျမရနိုငျတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတှေ အမြားကွီး ရှိနိုငျတယျလေ ကြှနျမ . . . လဲ အပါအ၀ငျပေါ့ ။
ကျွန်မ . . . မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သို့သော် မာယာတွေ မသုံးတတ်တဲ့ ခပ်တုံးတုံး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ။ လိုအပ်နေတာအခါ အလိုက်သတိလေး ဖြည့်ဆည်းပေး လုပ်ပေးတတ်ပေမယ့် မလိုအပ်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီး ဧည့်ဝတ်မကျေတတ်ဘူး ။
အဲ့တာကပဲ ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက် ဖြစ်လာတာပါ ။ လူကြီး သူမပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထက်လူကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး မဖားတတ်တဲ့အတွက် အမြောက်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ ကျွန်မက နဲနဲလေး အလိုက်မသိဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလေ ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ညံ့တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေနဲ့ မကြာခဏ အစွပ်စွဲခံရတော့တာပဲ ။
ကျွန်မမှာ အမှန်တကယ် ပေါင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်းဆိုလို့လဲ တကယ့်ကို အနည်းငယ်လေးပဲ ရှိတာပါ လက်တစ်ဖက် မပြည့်တပြည့် အပေါင်းအသင်းနဲ့ ကျွန်မ ပျော်အောင်နေပါတယ် ။ ကျွန်မ အကြောင်းမသိတဲ့သူဆိုရင် အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ ။ မာနကြီးလိုက်တာ မခေါ်ချင်သလိုလို မပြောချင်သလိုလိုနဲ့ တဲ့ ကျွန်မအကြောင်းတွေ ပြန်ပြီး ကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျွန်မ ဘာမှ ရှင်းပြမနေတော့ ထင်ချင်သလိုသာ ထင်ပါတော့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မသာ အဆင်ပြေအောင် နေပါတယ် ။
မုသားတွေမှ ချိုသာတယ်ထင်တတ်တဲ့ နားမှာ ကျွန်မစကားတွေက ခါးကောင်း ခါးနေနိုင်တယ်လေ ။ မရှိတာကို ရှိသယောင်ယောင် မသိတာကို သိသယောင်ယောင်နဲ့ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပြီး မနေတတ် မပြောတတ်ဘူး ။ ဖြစ်သင့်တာတွေ ရှိလာတဲ့အခါ စေတနာထားပြီး ပြောတတ်သလို မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်လာအောင်လဲ တားတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်မနဲ့ဆို ဝေးဝေးက ရှောင်ကြတာလေ ။
ကျွန်မ . . . မာယာတွေ သုံးနေဖို့ထက် အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောပြတတ်တာကို ပိုပြီး သဘောကျတယ် ။ ဒါပေမယ့် သကာရည်စမ်းထားတဲ့ ချွဲ့ချွဲ့နွဲ့နွဲ့စကားတွေကိုမှ ကြင်နာတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတာလေ ။ အဲ့တွက် အချစ်ရေးမှာလဲ ကံ​ကောင်းခြင်းတွေထက် ကျန်ခဲ့ခြင်းတွေက များပါတယ် ။
စေတနာ . . . မှန်ရင် ရောင်ပြန်လာလိမ့်မယ် တဲ့ သိပ်တော့ အချိန်မနှောင်းစေချင်ဘူး ။ တစ်ခါတစ်ရံ တန်ဖိုးတွေ သိလာပြီးမှ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီး ရှိနိုင်တယ်လေ ကျွန်မ . . . လဲ အပါအ၀င်ပေါ့ ။
ကိုယ့်ကို မှီပြီးရပ်နေတဲ့ ဘဝတွေအတွက် ….ကျွန်မ လဲကျလို့မဖြစ်ဘူး
အငိုနဲ့စခဲ့တဲ့ လောကမှာ ပြျောအောငျနတေတျဖို့လိုပါတယျ